Doorashadii waad ku guulaysatay laakiin kursiga u daa walaalkaaga aad ka guulaysatay. | Awdalpress.com	Qoraalo | Tacliiq Raaci | E-mail / Home
Doorashadii waad ku guulaysatay laakiin kursiga u daa walaalkaaga aad ka guulaysatay.
Waxa Daabacay staff-reporter on Jan 20th, 2013 and filed under Daily Somali News, Editorial.
Both comments and pings are currently closed.	Awdalpress – London – Sheekada layaabka leh ee ku soo korodhay masraxa siyaasadda Somaliland, ayaa lagu daah-furay, in doorashadii degaanka loo galo si nabad ah, loona tartamo ururro, kooxo, beel beel iyo shakhsiyaaad. Laakiin natiijadii soo baxday ay gasho gor gortan iyo in beel beel la isku qabsado. Haba la is qabsadee, haddana la waayo xeer lagu kala baxo. Komishankii doorashaduna uu aakhirkii ku dambeeyo magac u yaal. Dibna loogu noqdo habkii qabiilka ee eexda iyo is gaashaan buuraysiga ku dhisnaa.
Maamulkii Somaliland ee aan moodaynay in uu sharci iyo dastuur leeyahayna uu isugu biyo shubto hayb qabiil oo malaha u qarsoonayd. Si badheedh ah ayaana loogu dhaqmay. Bal daawo youtube kan.
Guji sadarkan hoose:
Daawo Wasiirka Arimaha Gudaha SL Oo Ku Guul Daraystay Dhexdhexaadintii Golaha Dagaanka Deg Saylac, Isagoo Digniin U Diray Beeshii Ka Hortimid
BNN.19.01.2013.Daawo Wasiirka Arimaha Gudaha SL Oo Ku Guul Daraystay …
Waxa kale oo iyana dhacday in si cad beelo iskula saftaan, iyaga oo danahooda ka dhexeeya isugu gogol badinaya. Laakiin qabiilka loo tashaday ayaa qaaddir si kale u ilaashanayaa. Waxana dhacday in cadaawaddii loogu soo tashaday ay dib ugu noqotay beelihii damaca iyo dulmiga isku bahaystay. Iyada oo sharcigii dawladnimo iyo wixii la isku xukumayey bannaanka la iska dhigay, lalana soo baxay xeelad ku salaysan haybtii qabiil.
Si kastaba arrini ha ahaatee, waxa doorashadii la galay ay abuurtay in la iska hor keeno beelo walaala ah oo degaanno badan wada dega. Waxana xasaasiyad la geliyey sidii doorashadii loo kala badiyey, illaa immigana waxa la qod-qodayaa nabarradii ka dhashay natiijadii doorashada ee loogu tala galay in nolosha lagu aaso amma lagu xabaalo. Dhinac walbana waxa laga maray sidii taasi loo suurto gelin lahaa.
Baroortu orgiga ka weyne, waxa buuqii gaadhay magaalada Diridhaba ee dalka Itoobiya iyo weliba balaayo aflagama dhawree Djaboui, waxa kale oo gurmad ka yimid Djabouti iyo nawaaxigeeda. Laakiin meel wal oo Zaylac iyo dadkeeda dulmi loogu soo tashadaba waxa ka soo if baxay calaamado rabbaani ah, ‘malaha dadka dulmiga horboodaya ayaan asal ahaan dhaqan u lahayn in ay wax dulmiyaan’ ayaan is idhi.
Gar-beeleedkii ugu dambeeyey oo wasiirka daakhiliga Somaliland shanta cisho u joogay magaalada Saylac ayaa la isku mari waayey, waxana ay illaa immig ku dhammaatay in beesha Samarroon lagu khasbo in ay labada kursi mid banneeyaan, oo weliba ka guddoomiyaha banneeyaan si loo raalli geliyo Beesha Ciise. Wax la rog rogo oo la rog rogo oo siyaasad kasta la isticmaalaba waxa xubnihii degaanka ee ka soo jeeday beelaha Samarroon ay ugu dambayntii oggolaadeen in ay guddoomiye xigeenka bixiyaan, taasi oo ceeb ku ahayd. Balse waxa si jees jees ah u diiday fadhigiina ka kacay xubnihii beesha Ciise ee la sasabayey. Ee weliba uu wasiirku u sheegay in boqollaal shaqaala ah ay dawladda Ahmed Siilaanyo u ballan qaadday in loo qoro.
Dabaca iyo soo jiidashada intaa le’eg ee aan beel kale oo Somaliland ah loo samayn, ayaa beesha Ciise ku gacan saydhay, waxa ay Maamulka Somaliland iyo odayada beesha dhexe ay u dhawaadeen in ay odayada amma xildhibaannada cusub ee beesha Ciise gondaha qabsadaan, oo ay kalmad kasta oo wanaagsanba ku yidhaahdaan. Halka ay beelaha Samarroon ay amar uun sugayeen ammaaba loo hanjabayey. Waxana ay ugu dambayn murankii la is dhaafsaday gaadheen, in beesha Ciise ay ku baanto, Meyerka haddii aan la na siin dhimasho ayaan ka xignaa iyo Wasiirkii Daakhiliga oo isna dhiniciisa ku hanjabay in aanay nabadda cidna ka baryey ee madaxa la is jabin doono.
Dhinaca Itoobiya ayaa iyana xabsiga la dhigay 7 oday oo reer Diridhaba ah balse sheegtay lahaanshaha magaalada Saylac, waxana ay saxaafadda mariyeen hadallo ammaanka mandiqadda wax yeelaya. Halkaana waxa ka abuurmay isbahaysi ay beelaha Somaliyeed ee degaanka Somalida Itoobiya ay ku diiddan yihiin fara gelin lagu sameeyo dalalka jaarka ah.
Isku soo wada duuboo, waxa natiijadii doorashada Somaliland ay ku dambaysey mid lagu maamulo hayb qabiil, oo la yidhaa reer hebelow waad badiseene, kursiga waxa iska leh reerka reer hebel.
Caddaalad xumadu waa wax cajab leh, oo ummado hore ku soo halaagmeen. Ibni aadamkuna waa daciif oo inta yar ee uu dunida joogo, waxa lagu imtixaamo waxa ka mid ah sida uu caddaaladda ugu dhaqmo. Mar kasta oo caddaalad la waayana waxa bilaabma is qab qabsi iyo dagaallo.
Nala joog wararka iyo faalladaba waan idinka dhargin doonnaaye.
This post has been viewed 2461 times.	Categories: Daily Somali News, Editorial